K-Lite Codec Pack 8.10 Full Software ...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ K-Lite Codec Pack 8.1 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Full version လေးဖြစ်သောကြောင့် သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 16 MB ပဲရှိပါတယ်...! (32 Bit and 64 Bit) နှစ်ခုလုံးမှာ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "K-Lite Codec Pack 8.10 Full Software ...!"